BlueFi ဖုန်း | အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဆက်သွယ်ရေး Apps ကပ » BlueFi ဖုန်း
BlueFi ဖုန်း APK ကို
Full-duplex စကားသံကိုဆက်သွယ်ရေးဘို့ကခွင့်ပြုသည်နှင့် Wi-Fi (အတူတူပင်ပူအစက်အပြောက်နဲ့ချိတ်ဆက်) ကျော်ပြည့်စုံစကားပြောခန်း, လုံခြုံတဲ့ဘလူးတုသ်ကွန်နက်ရှင်သို့မဟုတ် Wi-Fi Hotspot mode.Now မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကို support!
Wi-Fi အသုံးပြုသူများသည်: သင့်ကြိုးမဲ့ router ကို multicast packets တွေကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ရှိနေသည်။ သင်ကမပါလျှင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာဒီ app တစ်ခု Starbucks ကပူအစက်အပြောက်နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Wi-Fi Hotspot အသုံးပြုသူများသည်: အန်းဒရွိုက် 4.0.3 များအတွက်သာဗားရှင်းအထက်သာရရှိနိုင်သော - ထို Wi-Fi Hotspot function များကိုအပေါ် switching ပြီးနောက် app ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
- Ping တစ်ဦးအဆက်အသွယ် (option ကိုထိပုတ်ပါအဆက်အသွယ်ရဲ့ icon ကို)
- တစ်စုံတစ်ဦးကိုသငျသညျ pings သည့်အခါအသိပေးချက်များလက်ခံ
- စိတ်ကြိုက် setting များကို
- တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် BlueFi entry ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦး Wi-Fi & Bluetooth ကိရိယာမှဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်
keywords: ဘလူးတုသ်ဟောပြောပွဲ, ဘလူးတုသ်ဖုန်းကို, အပြာ fi, walkie Talkie အတိုင်း, wifi ဟောပြောပွဲ, wifi ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့, ဘလူးတုသ်စာတိုပေးပို့ရေး, wifi စာပို့ခြင်း
အဘယ်အရာကိုအင်္ဂါရပ်ကိုသင်နောက်တစ်နေ့ကြည့်ဖို့လိုပါသနည်း ဒီစစ်တမ်းအဖြေ - goo.gl/VDkSMz
အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, သင်၏မိတ်ဆွေများအဖြစ်ကောင်းစွာ app ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း get ကျေးဇူးတင်ပါ။
bug တွေ & ပျက်ကျမှုအစီရင်ခံစာများတင်သွင်းပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
2.88 ကို MB
ဦးစီး 15 ...
wifi Hotspot - ...